Caancala Dhangii - Filannoo Dhangii - Walfaannee Deetaa - Dirqalaalee (Taattoota)fili
Walfaannee deetaa garra kanati hiriirsii:
Iddo kana ti siiqqee Y haalata hammamteessa lammanii giddu jiru fili. Siiqqee kana hammamteessi ti amala adda addaa keni.
Siiqqee Y issa tokkoffaa
siiqqee Y lammataa
Addaan fageenya giddu lammen tarjaa dhibbeentaan qindeessu. Addaan fageenyi olaa kun 600%.
"stacked" fi "percent" tiif tattoo tarjaa( kabala dalgoo), sanduuqa mirkaneessaa kana erga mallattessite booda baqaana tarjaa walitti hidhii kan sararaan wal fakkatu waliin.
Kabaloota moggaa moggaadhaan agarsiisi
Yoo siiqqonni taattoo keessatti agarsiifaman fi walfaanneen deetaa siiqqonnitti tokkoffatti miilta'e, karaa biroon immoo walfakkannen deetaa siiqqoo lammaffaatti milta'u, walfakkaanneen deetaa lamaanuu gargar agarsiifamamii tokkoon tokkoo isaaniis wal'irra ta'u.
Akka bu'aatti, kabalaan siilloo y ti miilta'e walakkaan isaa ykn gutummaan guututti kabala siilloo y isa lammaffaadhaan dhokata. Kana dhorkuuf, moggaa moggadhaan filannoon akka mul'atu taasisi. Yoo siilloon tokko qofa irraatti miilta'e kabalaan walfaanee garaagaraa ni agarsiifamu.
Taattoo deeloo fi donutii tiif ni jira. Kallattiin durtii biilee taattoo deeloo itti qindaa'e kallattii sa'aatitiini Faallee sa'aatii haalojii dandeesisi kallattii biilee faallaan kaasuuf.
Tuqaa xiqqaa karaa geengootiin harkisi yookan geengoo irratti qabannoo kamiiyyuu cuqaasi kofa jalqabaa kan deeloo yookan donutii taattoo qindeessuuf. Kofni jalqabaa qabannoo kofa herreeguu ti kan biileen irraa kaafamu. Gatiin diigrii 90 qabannoo sa'aatii 12 citaa tokkoffaa kaasa. Gatiin diigrii qabduu sa'aa 3 irraa eegala.
Taattoo deeloo fi donuutii 3D keessatti kan mosajjii fooyyeen isaa duraanii ta'een uumama. Kofni jalqabaa diigrii 0 bakka diigrii 90. Taattoo haraa fi duraanii kan 2D durtii kofni diigrii jalqabaa 90.
Yommuu kofa jalqabaa yookan kallattii jijjiirtu, mosajjii fooyyee ammaa gatii jijjiirama qofa agarsiiisa. Fooyyeen mosajjii duraanii galmee walfakkaatu gatii durtii fayyadamuun agarsiisa. Yeroo hunda kallattiin sa'aatii fi gatii jalqabaa diigrii (taattoo deeloo 2D) yookan diigrii 0(taattoo deeloo 3D) dha.
Kofa jalqabaa diigrii 0 fi 359 gidduu jiru galchi. Gatii agarsiifame jijjiiruuf xiyya cuqaasuu dandeessa.
Gatiiwwan hin jirre hojjadhu
Walfaannee deetaa taattoo keessatti mul'ifamu keessaa takka takka gatiiwwan deetaa baduu danda'u. Gatiiwwan hin jirre kana akkatti hojjettu baruuf dirqaalee hedduu keessaa filachuu dandeessa. Gosawwan taattoo qofaaf dirqaaleen kun ni jiraatu.
Addaan fageenya hambisi
Gatii hinjirreef, deetaan homtuu hin agarsiifamu. Kun durtii gosawwan taattooti Tarjaa, Kabala, Sarara, Culqee.
Gatii hin jirreef, gatiin-y akka zeerootti agarsiifama. Kun naannoo gosa taattoof durtii dha.
Sarara itti fufi
Gatii hin jirreef, tilmaamni gatiiwwan bukkee irraa ni argama. Gosa taattoo XY tiif kun durtii dha.
Gatiiwwan mandheewwan dhokatan irraa dabali
Gatiiwwan maandheewwan ammee hangii mandhee maddaa keessa dhokatanii jiran agarsiisuuf mirkaneessi.
Title is: Filmaata